आज नेपालमा संक्रमणको आयो यस्तो अपडेट, प्रशासनले पनि सर्वसाधारणको लागि जारि गर्यो यस्तो सूचना – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : काठमाडौं । नेपालमा भाइरसका चार हजार ५२४ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो चौबीस घण्टामा १३ हजार ८०५ नमूनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड १९ सम्बन्धी बिवरण अद्यावधिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीर कुमार अधिकारीले चौबीस घण्टामा आरटीपीसीआरबाट चार हजार ५२४ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको बताए । एन्टीजेनबाट ७९२ जनामा पोजेटिभ पाइएको जानकारी दिए।
सह प्रवक्ता डा.अधिकारीले हाल एक लाख एक हजार ९९३ जनामा भाइरसको सङ्क्रमण सक्रिय रहेको बताए । छ हजार ८३२ जना संस्थागत् आइसोलेशनमा र ९५ हजार १३१ जना होम आइसोलेशनमा रहेका छन् । हाल ८३७ जना क्वारेन्टिनमा छन् । पछिल्लो चौबीस घण्टामा सात हजार २१९ जना सङ्क्रमित कोरोनामुक्त भएका छन् । सह प्रवक्ता डा. अधिकारीले पछिल्लो चौबीस घण्टामा १०१ जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको बताए।
यस्तै काठमाडौं उपत्यकाको निषेज्ञाज्ञा केही खुकुलो बनाउँदै जेठभर लम्बाउने निर्णय गरिएको छ । बुधबार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु छलफल लागि बैठक बसेका हुन् । बैठकले जेठ ३१ गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
Prevकुमारी सुबेदीको पिडा : मर्ने प्रयास कति गरे तर ८२ बर्सिय आमा पाल्नु छ (मार्मिक भिडियो सहित)
Nextचौधरी उद्योग परिसरको लागलागी ५ घण्टापछि नियन्त्रणमा, कति भयो क्षती ?